သံမဏိလူသား မဟုတ်တာမို့ ကိုဗစ် Positive ဖြစ်တာ မဆန်းပါဘူး ဆိုတဲ့ ထွန်းကိုကို – Myanmar Update News
သံမဏိလူသား မဟုတ်တာမို့ ကိုဗစ် Positive ဖြစ်တာ မဆန်းပါဘူး ဆိုတဲ့ ထွန်းကိုကို
October 27, 2020news uptodate0 Comments
ပရဟိတ မင်းသားတစ်လက် အဖြစ် ဦးကျော်သူရဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာ ကျရာတာဝန်ကို နေ့စဉ်မပြတ် ထမ်းဆောင်နေသူ ထွန်းကိုကို ကတော့ ဒီတစ်ခေါက် ဦးကျော်သူ ကိုဗစ် Positive ဖြစ်ချိန်မှာလည်း ကိုယ်တိုင် ဆေးစစ်ချက် မယူရ သေးဘဲနဲ့တောင် ဦးကျော်သူကို ပြုစု စောင့်ရှောက်ဖို့ ရဲဘော်ရဲဖက် စိတ်ဓာတ်အပြည့်နဲ့ အဖော်အဖြစ် လိုက်သွားပေးခဲ့သူပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ (၂၄) ရက်နေ့ကတော့ ထွန်းကိုကို ကိုဗစ်ပိုးရှိ မရှိ စစ်ဆေးဖို့ Swab test လုပ်ခဲ့ပြီး မနေ့ညကတော့ ဦးကျော်သူက ပျော်မနေကြပါနဲ့ဗျာအခုထိ P ပါဗျာ ( ကျော် နဲ့ ထွန်း) ဆိုတဲ့ စာသားလေးမျှဝေခဲ့သလို ထွန်းကိုကို ကတော့ သံမဏိ လူသားလည်း မ ဟုတ်ဘူး…. စက်ရုပ် လူသားလည်း မဟုတ်ဘူး…. ပါဝါရိန်းဂျားလည်း မဟုတ်ဘူး….P ဖြစ်တာ မဆန်း ပါဘူး ဆိုပြီး သူ့မှာလည်း ကိုဗစ်ပိုး တွေ့ရှိကြောင်း ပရိသတ်ကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ ပရဟိတမင်းသားနှစ်ယောက်စလုံးကိုဒီရောဂါကို အနိုင်တိုက်ကြဖို့နဲ့ အမြန်ဆုံးသက်သာပျောက် ကင်းစေဖို့ ဝိုင်းဝန်း ဆုတောင်း ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးအတွက် ဆရာဝန်၊ ဆရာမတွေ ကလည်း စိတ်ခွန်အား၊လူခွန်အားရအောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးစား ကုသပေးနေသလို ဝိုင်းဝန်းဆုတောင်းပေးနေကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရဲ့ မေတ္တာ ဓာတ်ကြောင့်လည်း အမြန်ဆုံးပြန်လည် သက်သာ ပျောက်ကင်းလာမှာတော့ အမှန်ပါပဲနော်။ Source – Yanpaing Tunko